War-murtiyeedka kasoo baxay Shirkii Kismaayo ee maamul Goboleedyadda | Kalshaale
Oct 11, 2017 - 67 Aragtiyood
Kismaayo (Kalshaale) War murtiyeed ka kooban illaa 16 qodob ayaa goor dhow laga soo saaray shirka Wadarashiga ee Kismaayo ugu socday Madaxda Maamul Goboleedyada Soomaaliya ee kala ah Jubbaland, Puntland, Hirshabeelle, Koofur Galbeed iyo Galmudug.
Akhyaarta ra'yigiina halkan ku qora (67)
kkkkkkkk ha isku tumato . wiilsshii yaryaraaa ee qurbe joogta aha ee dardarta iyo indho isku qabadka aan laga fiirsan jilbaha dhulka loogu dhuftay. wax walba waaloo yeedhiyay sidaa sameeya iyo sidaa joojiyaa ka dhacday
ugu dambayn koonfurta somalia-banaadir waxaa madaxwayne ka aha cabdiweli gaas reysalwaasana waa mudane waare.
axmed madoobe aya losoi jediyay inu hogaamiyo lkn wuu diiday isagoo ka cararaya in lagu xanto xil raadin buu shirka uqabtay
Dowlad dhexe intaan loo hanjabin ayaan ka waynay dantaada ku toos.
Bal hadda yay dowlad u noqon lahayd haddii shantan maamulba kalsoonida kale noqdaan?
Cajab waxbaa salag leh! socona mayso in dadkii dastuurka qorey oo arka la bad badalo oo ay iska aamusnaadaan.
Alla muxuu Baadow Diyaarad Europe Soo raacey,
Ma dowladdaa Kalsooni laga rabaa oo dhiibto, mise Barasaab magaalo ayaa dhiibo kalsoonida.
Governorka Banaadir oo Kalsoonidii kala laabtey Dowladda Dhexe.
( Caalamka waa u kala soocanyahii, siyaasiyiinta, Hilibleyaasha, Doctors, bus drivers). Maryooley waxaa kaa xigto Sarwaal iyo shaati inaad xirankarto.
Hade Fb iyo internet waaba kaabeen.
Sheekadan waxaay u dhaxaysaa
Mareexaan iyo majeerteen ama
Madaxweyne Farmaajo Iyo cawaro Gaas.
Sidii marxuun Jaale Siyaad iyo Cabdilaahi Yusuf kkkkkkk
Waxaad maqli doontaan gobolada jubooyinka oo Bare hiiraale dagaal Iyo labokaclayn cusub Ka bilaabay Iyo gudaha kismaayo oo xabadu Ka socoto iyo cagdheertii oo NFD futada Galisay.
Riwaayadii ugu xiisaha badneeyn hada ayeey bilaabmatay hhhhhhhhh
Adeer miyaad u jeedaa qodobkaan shaley kuu sheegay ee ahaa-
Waxey u dig iyo damleeyahiin -qamadiga Xamar ha noo soo marinina ee toos noo siiya ( waxey u mahad celiyeen deeq (sun) dhiibayaasha, waa just idinkaan Kabaha idiin sidnaa.
File Sool iyo Sanaag ayaa iigu qoran Qamadina waan ku dalban. Kuwaas intey Soomaali ku jiraan Dabo dhilif iyo caade qaate laga waayimahayo. Waliba markuu Wiil Sade Villada joogo.
Maseyr iyo Mahbarnimo ayaad ku jireysaan ilaa aduunka la rogo.
fardojaan. cagdheer siyaasada somalia itoobiya umbaaa ka xidh xidhay oo ka hortagnayd anaguna iyadaan somalia ka hortaagnayn oo xabad madaxa kala dhacaynay oon ka mashquulin jiray marka hada wan is fahanay oo jabartiyoow aynu wax isku darsano somalida iyo xabashidaba utalino ayaan ku heshiinay indhahagana macalin kuu aha inan somali xabashi iyo oromaba kaga dhawaajinay
Tuugsigii Emaaraatka hada ayaa la iska matajinayno.
jaahilnimada somalida waxaa kamod aha inaysan siyaasada baab uga duleelin sida kan dabshid wata waxay uhaystaan mar haduu nin madaxwayne ama raysalwasaare yahay inu hadal kuu dhoho ama ficilku sameeyaba sax tahay lagana hadli karin. adeer sidaaa ma aha hadalki madaxwayne kaso yeedha ama talabadu qaado waxa loo eegi dastuur ka iyo sharci ahanshaha sido kale faaidada iyo khasaaraha marka umba laga yeeli ama laga diidi.
Absame boy sxb
Idinka Iyo nimankii mareexaan ee jubooyinka Isla Daganaa jambal Yar oo caata ah ayuu idin tuuray cawaro Gaas balse waa waxaad Ka faaiidaan
Qodobadu tirabanaa oo tayo yaraa
Nabar aad fileysay naxdin malahan awalba waan ogeyn hogaamiye koxeedyadu in aysan soo sareen wax kheyr leh
@@ wiil cideed
Ma waxaad leedahay dowlad awood leh sidaan ayaan nooga fiican?
Armoow qaran no dhamaa intii aan 5 madaxweyne iyo 5 awodood yeelan laheyn?
War hooy haleeska daayo qabiil u hiliska
dhalinyaradan madaxtooyada la wareegtay waxay qaadeen tabtii damuljadiid ee ahayd federalism la dagalama oo mamulada burburiya marki buuq laga bixi waayana dastuurka badala oo federal halaga takhaluso haday taasu socon waydana ugu yaraan hogamiyeyasha badala oo rag dhaganugul ood ledihin mesha gaysta. adeer taas damuljadiid oo cir iyo dhulba taabatay ayaa laga diiday aakhirkina uhogansatay mamaulada oo talaabo aan qaadin an laga tashan sanadki udanbeyay kadibna ugu dambayn iyadaa mesha lagasaray ee wakhtiga ha luminina oo umaddan wax uqabta. mamuladan duruufo amni iyo dhaqale ayaa haysta hadaydan wax utaraynin ha wareerinina ee qaska kadaaya
ugu dambayn federalism waala qaatay hanaanka dawladeed ee dalkoo dhan ayaananku dhisan in lagu dhaqmana waa qasab hadii la in laga laabtana taaloobin aan hawl yarayn ayay ubaahantahay sida
1. dalkoo la xoreeyo guud ahan
2. somaliland oo laso xerogaliyo
3. Tirokoob rasmi aha
4. Afti dadwayne.
arrimahasna waxa muuqata inan 20 sanoo dambe xita lagu qaban karin loona soconin marka riwaayada aha soo toos oo federalism la dagaalan waa sheeko gaaban oo kula rogman.
Dadweeynoow goor dhaw ayaad maqli doontaan gudaha kismaayo oo xabadi Ka socoto
fardojaan jubooyinka waa lagu kala adkaaday buuq iyo mudaharad garbaharey iyo doolow wayka dhici karaan lkn ha filan xabad iyo gacmo la isula tago.
Tuugsiga carabta waa la iska matajinayaa
Miyaad taqaan sida loo aqriyo, Miyaad taqaan cidda ka masuulkaa iyo cidda ansixiso.
Baararka fafadhiiso, joornaal dhabta saaro, sigaar iska dhuuq dhuuq.
Caku ninkii Internet nagu sameeyey, iyo midkii Camp qaxooti nagu furey.
Meeqaan London ku arkey ayagoon magacooda qorikarin Siyaasad ka hadli.
Land of Punt ayaan ka bartey Geel *** Waxaa siyaasad barey.
“” xaange ayaad iila socod egtahey wiil MJ.
Kismaayo yaa ku kala adkaaday hhhhhhh
Soo tan sawaaxiligu waardiyeeyo Adeerkaa Axmed madoobe hhhhh
shekhaash orod adu qiiqaaga iyo sabta bidhaami maxaa siyaasad kaagalay awowyadaaba iskuma dayyine
Jubbooyinka lama dhaho, waXaa la dhahaa Kismaayo,
Waa run inta KAARE Kuukuuyo Kista joogo juuq iyo Jaaq majireyso.
Car Goobweyn ii soo dhaaf. (Deyn- Land of punt).
fardojaan kismayo wixi la isku hayay waxay ahyd uu yaaa aha beesha dhexe ee jubbaland waana lagu kala adkaaday runtana lasoo wada taabtay nin an cagdheer lahayn ma hunguriyeyn karo kursiga sare.
barlamanka firii aqlabiyada
dhamaan taliska ciidamada
sawaxiligu awood alshabaab oo kaliya umbu iga waardiyeeyaa ee arrimo somali dhexdood shuqul kuma laha mana galo duhur cad ban anoo daalan oo dagaal sanad aha xuduuda kaso bilabay ayan ceydhsaday mooryaantii kismayo madaxwayneyaasha sheegtay markas mar an ka tabar yaraaa majirin.
Ciyaar xiiso leh ayaa bilaabmatay
kikuyu way joogi intay uganda joogto hadana ina kordhiyo ayaa kujirtay war murtiyeedka mida kale axmed wu siyaasad fogyahay dhowr jeer bay arrimo isku qabteen isaga iyo kikuyadu oy ugu hanjabeen wanu bixi intu amusay bu addis ka degay laba guuto oo jabarti aha keensaday marka hada hadal dambe kumaso celiyaan oo amarada toos bay uqaataan
Reerkiina cagdheer waxaay badhtanka u galayn ciyaar Soo socotay ilaa Iyo 1978 kii hhhhhhhhh.
fardojaan aduunka lama socotid ader waad iska hadaaqaysaaaa cagdheer ilaahay unbay ka cabsan sanadadan iyo kuwa dambaba waxba kama taqanid.
la dagaalankii itobiya umbaa saaxada siyaasada naga saaray iyo kala qoqob dhexdanada aha tiina waa laga gudbay itoobiyo lala heshiii wiilal qabdahar ku dhashay ayaana hogaamiya ciidamada jubooyinka no more wamo and galti
Walaashaa iskuma hubtide seedigaa ha Isa seegina ayeey somalidu ku maahmaahdaa.
Waar hooy’ Cagdheereey arimaha dadka is haya Ka dhex baxa
Waar Bal dadkan looga taag la yahay tuugsiga carabta arka .
diaspora boys dhaqalihi bay jarteen soo am aha marka qaraabkaasu waa mubaax fil wakhti xaadir kkk
Asc fiicnanlaheyda inay masmaxdada kakenen hogamiya kooxedyadan isbaheystay waa WAX losoyeeriyay imaraad itobiya Ka dambeyso war halakaco waa inkuwaan looladegala sidii hogamiyakoxed yadii xamar laharay looga xoreyay xamar
ha is raacdo diidee ha is raabsatee daa
Ama Gaas haka dhigteen Guddoomiyaha Zeko qeybinta, ama Sharma’arke Bad Xaraashe haka dhigteen Qamadi keene,
4ta Sano ee soo socoto Farmaajo wuu joogaa Villa Xamar, bal aan aragno in Webi ka Jeexmo Saxara Bari.
Maxaa kuu soo harey Kismaayo, warkeedu waa sahlanyahey, Car Goobweyn soo dhaafa Kuukuyooy.
** ilaa Suurka Qiyaamo yeero Maseyr iyo Mahbar ayaad ku jireysaan. Dharlaawe dhar diidey ma aragteen.
“” ilaa Somaliland soo laabato awalba yaa u fadhiyey midnimo iyo Qarannimo.
Sheekadu waa dhantahay 90% wadanka anagaa xukuna farmaajo iyo qolada Villada haday joojin waayaan waxa ay wadaan Villada ayaa la isugu iman oo ah meesha ugu dambaysa oo ciyaarta kama dambaystaa lagu qaban doono.
Inta ka horaysana Madaxweynaha dadban Prof Gaas baa wadanka ka masuul ah inta ay is garanayaan kooxda Villada fadhida ee riyada khayaaliga ah ku jidha dastuurka iyo wax dambe oo ay go’aan ka gaari karaana ma jiro ilaa amar dambe
Dabshid reerki waxku sobaxday qaran dumiskii laguxaman jiray kol badibiyan kol df minjo xabiyan
Meeshii ugu fiicneyd bay mareysaa ! Waayo waxaa ii muuqata inaan fahmiweynay Furqaanka iyo Daaquudkaba . Waxaasi oo kalena waa xoolonimo . War ma waxaan ka liidanaa Chineese’ka marjaca ka dhigta : JIN and JANG filosophy !
” Khadiijo Foodey baa yaabtay “
Dawlada Somaliya Oo Lagu Cadaadinayo Iney Xiriirka Ujarto Dawlada Qadar Waawareey
Iyo In Dawlada Wadatashi La Sameyso Dawlad Goboleedyada Waxwalba Ay Dawlada Deeqaha Soo Galo
ROODH MAABKII AYAA HURDADA LAGA KICIYAY
Waxay Dhashaa Hala Arko
Qofwalba Tiisaa Ucad
Farmaajo Imisaanu Laheyn War Ha Aamusnaan Mar Uun Hadal
Hadda Waxaan Kula Talinayaa Inuu Afkiisa Xidho
Waayo Wixii Alamtara Soodhaaf
In a nutshell, khiyaano qaran oo loo cumaamadin weeye hadalka Amhara lovers
Waxaa meesha isugu tagay
Abdiweli Gaas oo weli diidin xamar looga taliyo welina ka qiiqayo hadhaagii dakaalka sokeeye
Axmad madoobe oo been u akhrinayay Jubbaland iyo Soomaalida, khaaiinnimadiisii uu qarsan jiray imminka bannaanka keenay ahna askari Xabashi
Sharif sakiin oo ah askari Xabashi, kuna caan baxay khiyaano midabkay lahaydba oo xuduuda gobolkiisa geeya Muqdisho x Control
Xaaf oo business iyo dallaalnimo ku caan baxay, background qurux badanna lahayn
Waare oo UN food and allocation iska raamsan jiray.
Maxay kula tahay dadkaasi inay ka soo bixi karaan aanan ahayn khiyaano qaran oo la hoos dhigay mooyee.
Dhinaca kale waa Xoosh oo jabkan horseeday iyo nacastaa villa Soomaaliya joogto oo aragti ka yeelan wayday
Midnimada Qaranka Soomaaliya
Aqoonsan wayday Khaatumo State of Somalia
Ka hadli wayday nijaasta imaaraadka boobaya dekadaha dalka Somalia in the name of investment iwm
Ciidamada gumeysiga ku haysto qarankan
Qeexidda aragtidooda federalka
Qaybinta wixii baryo lagu soo helo iwm
Dhinaca kale waxaa jira raadkii ay ka tagtay ururkii Damun jadiid oo Somalia u fasirtay hab qabii oo ka baxsan federaalka aanan ahaynna kii kacaankana iyada oo ka tallaabtay wixii la yidhi sax iyo khaladba oo lagu heshiiyay
Waxaa arrinkaasi ay keentay in muqdi wayn la geliyo dowladda dhexe awooddeeda, tan gobolka dowrkeeda iyo cidda isku xidhaysa
Haddii qabyaalad wax lagu qaybsado shar iyo khayr lama wada ilaalin.
Goaanka waxaa uu ku tusinayaa oo kale in Barlamaanka Soomaaliya noqday waxaan jirin.
Dowladda dhexe mid wax loo yeedhiyo
Maamul goboladeedkuna yihiin hoggaamiyo kooxeed cusub oo uu ka maqan yahay madaxweyne mideeya
Haddaan si kale u dhigo Xamar waxaa laga dhigay meel laga guuray oo political orderku maanta yahay maamul goboleedka
Wax walba waxaa iiga daran fulaygii Farmaajo inuu weli aamusan yahay, hayna road map ummaddan laysugu keeni karo.
Haddii uu wax tarayo, drunkard xoosh ha caydhiyo si loo badbaadiyo qarankan.
Somalia Alle ayaa u maqan
War ma laha magaca waad iska soo qaadatay. Shaatigii Iidoorna waa kuu qarsan yahay.
Waar ka hadal aragtidaada ha iidoor lahayne.
Suldaan Ali Zubeer ayuu leeyahay shaadh Iidoor ayaa u qarsan.
Waan garanayaa dhabta ka hadalkeeda lama dhacsanid.
Waadanku waa faderal democracy dhab ah ku xigto, ragaan ayaa matala shacabka goboladooda, dowlad dhexe waxay ahayd inay facility u samayso kana shaqayso danta guud ee umadda Somaliland, udayso arimaha hoose maamulada, deeq iyo dayn waxay magaca umadda Somaliyeed kusoo qaado cadaalad u qaybiso.
I see good future for Somalia haddii la fahmo whats on the stake!
Farmaajo oo federal diid ah oo kuwo federal diid ah ku xeeran yihiin warkooda cidna kuma jirto.
Car Balcad federalka usoo dhaafa iyo Ceelasha biyaha!
Idinka iyo Ugandesekiinu Villa ku wada jira!
Maba la fahamsana in Somalia hadda godkii lagu riday kasoo bixi rabto, yaa idinka yeelaya in marlabaad god ku ridaan!
ABTI, aniga waxaan taageersanahay FEDERAL SYSTEM.
MUQDISHU is not my home. MUQDISHU can’t represent as the Capital City of the Great Somalia.
MUQDISHU sounds like a BARAWE CITY. MUQDISHU was and shall never sound like a city of capital. It is home of some particular inhabitants.
NINKII MUSLIMKA AHI, LABO JEER GOD ABEESO KUMA WADA QANIINTO.
We had been taught a lesson that we shall not forget all in our lives.
ABTI, ma ila socotaa.
Adiga waa hurudaa! Federal macnihiisa ma fahamsanid..ileen waa waxa u diidayso!
Federal means grassroots powerbase, tuulalada xitaa degmadu wax u yeerin karin.
Xiriirka waxaa loo jari kara dowladda dhexe iyo tan dowlad goboleedka waxaana xiriirka u jari tuulada!
Adeer dib loogu noqon mayo nin miciyo hilibka dadka ku cuno leh, xitaa maaha inuu ilko kore leeyahay! Waa in xabad ilig ah lahayn! Muushaari iyo boorash lee cuni karaa!
All the power from the people. Ninka madaxda ah waa nin dadka keensadeen markay doonaan suuqa u diraan!
New shining dawn for Somalia
Ali zubeer asc mudane
Hadalka adigaa dhameeyay xigmad kale looga laaban maayo
Waxaase dadka ugu liito qof aan aragti qaran ama aragti midnimo aysan ka muuqan hadan dadka fikirkooda ku eedeeyo
Suldaan Ali zubeer wadanku maanta badbaado ayuu u baahan yahay waan u jeednaa madaxdeeni wey muuqbeleen
Maxaa diidaayo berito gobalo somaliya kamid ah in ay dhihi karaan waxaan ku biirnay Kenya ama itoobiya?
Allow maqan somaliweyn indhuhusa mafiicno
Waxaan kale oo dadka daacad ka tahay wadajir, midnimo iyo jacayl umadda Somaliyeed ka dhaxeeya jecel waxaan idiin sheegayaa ha welwelina anaa war idiin og.
Federal macne kale malaha waa in xukunka la baahiyo oo hal nin oo corupted ah u gacan gelin oo dalka dhan dhismo, shacabka canshuurta laga qaado kii ka qaaday la joogo, waydiistaan waxa xaq u leeyihiin iyo basic service helaan sida amni, school, shaqo iyo caafimaad.
Somali waa isku af, diin, dhaqan iyo xidig&xigaalo cid kala qoqobi karta ma jirta oo maanta la jooga ma kala qoqobna!
Marka biyo qaboob caba ii nasta, don´t worry! federal diid dano kale leh yuu idin hodin.
For the first time I have fate in Somalia and I dare to dream bright future for Maryooley.
Waar Armaajo aaway? 😎😎😎🤣🤣🤣
Ninka ku riyoonaya Somalia oo dhan oo nin Xamar fadhiya steringka u hayo waa nin waxa Somalia ka dhacay ogeyn iyo inta dhulka isku jiro, dhul xitaa tareen iyo isgaarsiin macna leh lahayn.
waa qof aan dhuuxin maxaa xal ah.
Waa gurdan raac iyo qiiro jabaan miiran!
Waxa Somalia deeq lagu guray ilaa maanta Xamar kama soo baxdo xitaa ciidan Xamar amnigeeda suga oo ciidanka shisheeye looga maarmo lama dhisin, idina waxaad ku doodaysaan Somalia oo dhan farta halaga saaro.
Taas waa raadkaagii dib ugu noqo, waa dad aan ogeyn meesha loo socdo iyo meesha laga yimid ama tuug dano shqsi wata!
Laalin thanks god, rag wax og ayaa ayaa badan.
Waa fada ama ha fadaina, waa la idin fadsiin.
Adis waxaa badalay Emaaraatkakkk
Inyar sii oo hadana ha gaajoodo,ka dhaqaaq wuuu ku raaciye.
Waa nidaamka lagu dhaqo dadka la yeesho.
Wax saamayn ah Kuma yeelandoonaan dawlada somaliya – saa awalba Adisbay ku shirijireen
Laakiin waxaa yaab Emaaraalka ayayba u doodayaan kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Ku shubo,ku kaydso oo ku hadal.
Armaajo shaqadoodii loo doortay oo ahayd qaran hogaami oo dastuurka inta ku leedahay ku dhaqan ayuu ka baxay oo asaga iyo kuwo kale federal diid waxay ku bilaabeen dumiya dowlad goboleedka tabarta yar sida Galmudug iyo Hirshabeele, Jubbaland iyo South West dhulka la dhigo ka dibna hooyada federalka Puntland oo keligeed ah lagu goobto.
Waa lagu fahmay oo laga tashan, buuqa hadduu badiyo xiriirka loo jarin.
Sxb Somalia crossroads ayey maraysaa, waa in wada saxda lagu ridaa!
War waxan yaa wada akhriyey anigu waan ku dawakhayee.waxaan ka gartay sandareero ayaan u baahannay iyo beesha lixaadeey na arag waan shirayee.
Warkan waxaa ku xigi doona iyaga oo leh maamul hebel baa nagu soo duulay ma moodaa dad wax fulin kara.
Idinka waa la idiin soo jeesan marka wadada saxda ah cagta saarno oo mirahaheeda gurano!
Waxaan idin kugu yeerin Miis awlalkii iyo qaadkii saaran yihiin, idinka ayaaba diidi doonin.kkkkkkkkk
Dad waxaa jira soo kaca marka federal diid hadlo oo moodi federalkii la tuuray. Cajab😎
War dowlad dhexe eed leedahay iyadaa dalka matasha ma mashabka baydhabo, Kismaayo, Garoowe, Cadaado iyo Hiiraan ayaa doortay?
Dalka aad sheegi in ay hogaamiso yaa u dirsaday miyaysan maamuladu Parliament keensanin iyana dowlada sii dooran?
Farmaajo haddii maanta intaas caydhiso UNta xataa masoocelin karto. kkkkkkkkkkkkkkk.
Federal systemka lacag iyo dad badan ayaa ku maqan waana nidaamka checks and balance ku fcn oo dictatorship system la isaga ilaaliyo.
Farmaajo isaga oon Villa soomaaliya dhinac u dhaafi karin ayaa nala tasho laga waayaye maxaad u malayn kii oo xoog u heley maamul goboleedyada? in uu Dhaho Gaas Iyo Axmed baan xidhi miyaad rabta oo dalku god ku dhaco?
Pessimiste ayaa tahay, adiga iyo kuwo kale calaacal iyo aduunka ayaa godoomaya ayaa wadaan haddii gobolada tashadaan!! Kkkk
Dowonyahow gobolada oo nidaam, horumar, kala dambayn ka jirto oo amnigooda iyo service bulshadooda ka adag sida Somaliland, Puntland iyo meelaha kale oo rajo ka qabno in hirgasho, ii sheeg dhibka Somali ugu jirta?
Qiyaas gobolada oo sida maanta u wada fadhiyaan wixii danahooda ka tashanaya oo qayraadkooda lasoo baxaya, dowlad dhexe oo guud ahaan Somalia u hadasha leh. UK, USA, UAE, India, Germany, Ethiopia, Nigeria, Switzeeland etc. Lamid ah.
Gobolo ismaamula oo horumar ku tartama noqono.
Miskiin shalay Xamar unika leh lahaa markii la isdilay oo lakala tegey, la yuusayo maxaa loo kalala tagayaa!
Wax kala tagaya malaha, ee Xamar, Kismaayo, Hargeysa iyo Bossaso oo ah sida Dubai iyo Abudubay ama New York, Los Angeles ah weeye riyada.
Adeer toosi luquntaada, and Look the horizen!
See the light under the tunnel!
Marka aan idhi dowlada dhexe ayaa xidhiidhka loo jari karaa rag baa ka dhigey in aan Kitaab gubey.
War tuuladeyda danteeda is first then gobolkeyga second then again maamulgoboleedkeyda Third Dowlada dhexe is the last of my priorities.
Aniga awooda Farmaajo qaadan iyo mida Gaas qaadan maxaa iga galay!😎
Federal: a system which power is decenterlized from the president (if presidential) or the prime minister( if parliamentarian) to the local level just say district or village (constituency) and is the best way to be protected that one person becimes more powerful and then lead the country to a trynnical rule. This form of governments are the most transparent and democratic ones in this century.
No to inquisition era or Big Brother era.
Hogaamiyaha Garoowe, Mr. Gaas, waxuu ku guuleeystay in uu go’doomiya dowladda dhexe, oo ah mid iyaga lugta iska toogatay. Madaxweeynahii hore ee dowladda dhexe, Mr. Xassan Shiiiq, inta uu qaarna saaxiibo lanoqday maamulada iyo qabiilada, ayuu qaar kale sida maamulka uu hogaamiya Mr. Gaas go’doomiyay, yareeyayna saamenta uu kulahaa talada dalka. Hadeer, siyaasad xumadda iyo qaab darrada dowladda dhexe dadka hogaamiya dartood, miiska sidii kale ayuu isku rogay, oo dowladii ayaaba hadeer gacan ku gabat ah.
Lataliyaha madaxweeyne Farmaajo, Cabdiraxmaan Caynte ayaa yaabay 🙂
kkkkkkkkkkkkkkkkk adigu ma dowlad doon baad tahay mise in shacabka Puntland la go’doomiyo ayaa dowlad kuu ah? 😎😎😎
Farmaajo oo cadaado la fikir ah ayaan dowladnimo ka sugay deedna colaad ayuuba nagu bilaabay kkkkkkk
Soomali caqli xun
Aqoonta alle ku siiyey dadka ma wada laha waxa aragto ma arki karaan, inta aad qortay xitaa hadaad afsomali ku qorto ma fahmi karaan.
Thanks. That’s exactly what federal means against dictatorial rule=As individual I have power atleast my vote counts and I can influence who will rul my county.. They don’t understand this.
Badowda fadhikudirirka fadhida qabiil mooda qof meel socda!
Community is more important than clan affilliations.
Viva Federal republics of Somalia aka dfs.
anniga iska dhaaf shacabka Puntland’e, shacabka Galmudug iyo meel kasta oo Somaliya kamid ah oo eey joogaan dowlad nimo diid, iyo mahbar in la go’doomiya ayaa dowlad ii ah. Shacab maahan waxa aan ka hadlaya.
Isma oga, laakiin, Abdiwali Gaas waxuu ku ciyaarayayaa mustaqbalka cauurtiisa iyo caruur badan oo Somali ah.
Dowladda dhexe dadka hogaamiyana, goal ayuu ka dhaliyay.
Hadeer, ujeedada dhabta ah, ee dad badan oo kamid ah kuwii u qeeylinayay Qalbi dhagax ayaa soo baxeeysa. Laakiin, Abdiwali Gaas, dad badan ayaa u fududeeya marwalba qaska iyo mahbarnimada.
Waa ku salaamay brother.
Sxb don’t worry Hobyo beach become 3 most beiutiful beach on Earth, according Google foto compitision.
This picture calls ” morning in Hobyo Somalia”
Markaan arkay it was breath taking.
Biyo blue ah, xeeb ciid cad, qorrax iyo roob mahiigaan oo meel fog dhinaca badda hillaac iyo daruur madow kasoo socda..
Gal Coogle Earth ” morning Hobyo”
Haddii aqli jiri laha Somali iyoThailand cid kale ma adeen ee adoo Hobyo jooga ayaa billion dollar qorax iyo bad ilaah ku siiyey gadi lahayd!
Sida Dubai iyo Bankok.
Adna waxaad busy ku tahay yeelimaayo in Majeerteen Bossaso keligiis qaato! Ma ogid in wax Bossaso ka weyn haysato.
Waa Dameero wasooyin Ugandeese darbeeyo marna teendhada geysto.
Walaahi waa kugu wareeraa laba gruub oo Hawiye midka aa tahay!
Gruub 1. Hadaan Hawiye nahay dan nooguma jirto federal oo waa in sidii Siyaad Barre Xamar oo Hawiye ka taliyo loosoo bariis doontaa, hadaan Hawiye nahay Darood waan ka saarnay caasumadii Dhulkii Somalia bar ka badan degenyihii, wax noo socon mayaan Darood la’aan.. Mareexaan ugu miskiinsan shabaq Darood lagu soo celin karo waxna noo dhimayn= qabiiliste Hawiye.
Gruub 2, Hadaan Hawiye nahay Somalia waa kala tagtay Isaaq waa goostay, Puntland dowlad kibirtay noqotay, Caasumaddii anaga ayaa nalagu eedaynaa inaan qabiiladii kale ka saarnay anaga wax qaban weynay oo caawa Jareer nagu xukuntaa Xamar oo xaniinyaha nagu jiidayaan magaalayadii, intaan Somali u diinay ana ku heshiin karin, fuck qabiil, waxaan Somali ahayn ima galaan.
I love Darood iyo Isaaq oo mid Hawiye arkaan ka jecelyihiin mid Darood ah waraystaan. Kkkkkkk
Cadaado labada groub kaa tahay ma aqaan laakiin aniga qabiil ma iga aha taageerada federalka, waxaan si daacad u aaminsanahay hadaan federal qaadano in my life time arkidoono Somalia Africa ugu horeysa.
I am not a profet, loo waxyoodo, its from my little brain.
Googleka geli, Google war. Dawaco ayaa waxar cuntey, hadaad been moodo Googleka gali.
War Google waa Web wax lagu qoro SIda Kalshaale com.
Malaha wuxuu moodaa inuu ninka leh ja soo weriyo Malaa’ig. Google hunter.
Waxaan ka hadlayo waa live picture oo lagu tartamayo so daacad ah, qofkii sawirka keenay lagu abaal marinayo 1 milion dolar nr 1 ka, nr 2, 100 thousand dolar, nr 3, 50 thounand dollars,,
Google is not a joke.
Adiga doqomada Somali oo yaan qabiil hebel wax helin busy ku ah ayaad nr 1 ka tahay!
Ma aaminsanid in Somalia macal Hobyo barqaawo tahay.. Adiga MJ ayaa nolol haysta in diido oo gaajo laysay oo saxo fadhiya ayaa kuu cad ee wax qabso walaalkaa wax u ogolow liiska kuguma jirto.
You are dark historynof Maryooley which we hope a will be history. Welcome to golden state of Puntland.
Labadda group aad sheegtayba waa sida eey adiga kula tahay. Waana “falaccy, amaba invalid hypothesis”, waa wax aad cabis darteed iskaga dhaadhicay.
Xamar tag, oo soo arag, in Daarood laga saaray oo eeysan joogin. Nin weeyn oo aanan wax ka’ogeeyn Xamar ayaad tahay, oo aan ka’aheeyn, waxa reerkaaga iyo koox yar oo aanan waxba ku dhaamin kuu sheegeen.
Hobyo, iyo Boosaaso oo eey dowlad dhexe oo Somaliyeed u taliso ayaa iiga fiican, Hobyo iyo Boosaaso, oo kaaba qabiilo iyo qabqablayaal wiiqaya madaxbanaanida iyo sovereignity ga Somaliya ka taliyaan.
Hobya ayaad rabtaa in aad igu laaluushta. Ninyahow, dad kale ayaad igu qaldee, sida Xaaf, iyo xildhibaan Cabqiqeeybdiid[oo hadeer dhaqan celintii soo dhameeystay, caqlina u soo gadny] Cali Aloore, iyo daanyeero lamid ah, oo wax uun ku laaluushtaan.
Annigu ma doonaya in qabiil Somaliyeed la dhibbo, laakiin, waxaan u ogahay sida in aan dhimanaya sida aan u ogahay, ciladda, iyo qaabdarrada Somaliya raadkeeda [dadka primarily kow ka ah abuurida xasarradaha Somaliya, iyo dadka daanyeerada ah ee kaalmeeya qaswadayaasha, manaha ahan ajnabi iyo Ethopia iyo huuhaa]iyo sidii looga bixi lahaa dabinnada marba mid lagu dhacaya, oo hor taagan dowladnimada Somaliya.